फेस्बूक चलाऊदै पैसा कमाउन मिल्ने - chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
Home » अचम्म संसार , आज देशमा , हिजो - आज » फेस्बूक चलाऊदै पैसा कमाउन मिल्ने
फेस्बूक चलाऊदै पैसा कमाउन मिल्ने
नयाँ प्रबिधी नयाँ बिचार नयाँ बिकल्प ,
तेसै गरी अन्लाईन मनी सिस्टम पनि नेपाली दाजु भाई लाई सिकाउन पाए आभारी हुने थिए , आफुले चलएको नेट बाट पैसा अैरहेको छ तर तपाईं हामी धेरै लाई यो पद्धती थाहा छैन त यो सुन्ने बित्तिकै झुटो हो भन्ने गर्छौ । तर सतप्रतिशत साचो हो ।
हेर्नुहोस् त , हाम्रो देस बिधुतिय उपकरन प्रयोग गर्न , आजको दुनियाँ समेटीएको अन्लाईन पद्धती को सही उपयोग गर्न बाट कती पछाडि छ । साउथ अफ्रिका का एक डीप्लोमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी ले आफ्नो वेबसाईट लाई विश्व सम्म पुर्याउने लक्ष लियर हिंडेको छ । जस वेबसाईट ले तपाईंले तेस साईट खोले बापतको पैसा तपाईंलाई दिने छ ।
तपाईंले फेस्बूक त प्रयोग नै गर्नु हुन्छ । यू टुब पनि सुन्नु भको होल , गूगल पनि । यि सबै तपाईंले चलएको ईन्टरनेट को फाईदा उठाएर आफु अगाडि बडिरहेका छन । फल्स्वोरुप तपाईंहामीले पनि थोरै भए पनि प्रयोगकर्ता को हक बाट सित्तैमा फोटो उप्लोड र अन्य उपयोग गर्छौ । तर याद राख्नुहोस् तपाईंले राखेको फोटोबाट कम्तिमा ५ डलर सम्म कमाउछन । ति संस्थाले प्रती सेकेण्ड करोडौ डलर कमाउने गर्छन् । तपाईंले सोच्नु भएको छ ? तपाईंले जती प्रयोग गरेपनी सित्तैमा किन दिएरहेछ ?
आज को यो युग प्रतिस्पर्धा को युग हो कमाइ त सबैले गर्नुनै छ । तर तरिका फरक , साउथ अफ्रिका को एक बिथ्यार्थी ले आफ्नो वेबसाईट लाई चर्चित गर्न प्रयोग कर्तालाई प्रयोग गरेबापत भारी रकम थमाउने गर्छ ।
आज को यो युग प्रतिस्पर्धा को युग हो कमाइ त सबैले गर्नुनै छ । तर तरिका फरक , साउथ अफ्रिका को एक बिथ्यार्थी ले आफ्नो वेबसाईट लाई चर्चित गर्न प्रयोग कर्तालाई प्रयोग गरेबापत भारी रकम थमाउने गर्छ । सुरु मा उस्को अकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै १० डलर बाट सुरु हुन्छ । तेस्पछी तपाईंलाई एउटा लिन्क दिने छ । तेस लिन्क तपाईंले अरु कसैलाई दिनु खोल्न आग्रगरेर खोले बापत २ डलर दिने छ । त्यो क्रम जरी रहने छ लिन्क एउटै नै हुने छ । ऐले सबैलाई थाहा छैन र अपत्यारिलो बनेको छ । कसरी यो रकम दिन सक्यो त त्यस्ले भन्ने खुल्दुली होला । याद गर्नुहोस् तपाईंले उस्को वेबसाईट खोले बापत कमाएको रकम को ७५ % मात्रै हो त्यो । २५ % आँफै राख्ने गर्छ । गज्जब छ अन्लाईन
तपाईं फेस्बूक प्रयोग गर्नु हुन्छ तपाईं को साथी हरु लाई लिन्क क्लिक गर्न लगाउनुहोस् ।
उदाहरण : तपाईंको ४०० जना साथी लाई लिन्क मेसेज गर्नुहोस् । प्रती व्यक्ती २ डलर को हिसाबले ८०० डलर भयो नेपालीमा परिवर्तन गर्दा झन्डै ८०००० भयो । हेरौ तपाईं के कती गर्नुहुनेछ ।
तपाईंको लागि लिन्क
Labels: अचम्म संसार, आज देशमा, हिजो - आज